पशुपालन ज्ञान अनिवार्य | Epradesh Today
Homeमुख्य खबरपशुपालन ज्ञान अनिवार्य
तुलसीपुर, ३ असार । घरमै बसेर आफ्नै तरिकाले पशुपालन व्यवसाय गरेका किसानहरु पशुपालनसम्बन्धी ज्ञानको अभावले व्यवसायमा चुनौती देखिएको बताउँछन् । पशुपालनसम्बन्धी आफूहरुलाई पूर्णरुपमा ज्ञान नहुँदा स–साना समस्याले आम्दानीभन्दा खर्च धेरै हुने गरेको उनीहरुले बताउने गरेका छन् ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं ७ मा बस्ने रिमा खड्काले पशुपालन गरेको निकै लामो समय भयो । तर पशुपालनको माध्यमबाट लगानी अनुसारको लाभ प्राप्त गर्न भने अझै नसकेको बताउँछिन् ।
पशुपंक्षीको व्यवसायबाट प्रशस्तै लाभ हुने भन्दै बाख्रापालन सुरु गरेको भएपनि यससम्बन्धी आफूलाई केही जानकारी नहुँदा निकै समस्या भएको बताइन् ।
समाजमै बसेर केही गरौ भनेपनि आफूलाई पशु व्यवसायसम्बन्धी केही थाहा छैन, उनले भनिन् ‘थोरै भएपनि यसबारे कसैले जानकारी दिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ।’
पशुपालन के–कसरी गरिन्छ ? भन्ने विषयमा प्रशिक्षण तथा तालिममार्फत जानकारी लिएका किसानहरुलाई यो पेशा निकै फाइदाजनक हुने उनले बताईन् । पशुपालनसम्बन्धी नीति, प्रक्रिया, भवन, पुँजी व्यस्थापन, चुनौतीलगायतका विषयमा जानकारी नहुँदा लगानी खेर जाने चिन्ताले सताउने गरेको बाख्रापालन व्यवसायी खड्काको भनाई छ ।
पशुलापन सम्बन्धी जानकारी लिएर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने हो भने आयआर्जनका निम्ती यो पेशा निकै उपयुक्त भएको बताउँछिन बंगुरपालन व्यवसायी निर्मला विक । उनले विभिन्न समयमा प्राप्त जानकारीमूलक न पशुको आहार र स्याहारसम्बन्धी तालिमले आफूलाई व्यवसायीमुखी बनाएको बताइन् ।
स्थानीय तहले समय–समयमा पशुपालन व्यवसायहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि विभिन्न किसिमका तालिमहरु सञ्चालन गरिदिनु पर्ने उनीहरुको माग छ ।
यसैगरी लामो समयदेखि कुखुरा व्यवसाय गर्दै आएका देवविक्रम केसीले कुखुरापालनका लागि आफूलाई दाना र पानी दिने बाहेक अन्य केही विषयमा जानकारी नभएको बताए ।
‘हामीले बाख्रा, बंगुर, भैसी, गाइ, कुखुरापालन गर्दै आएका छौँ तर सोंचेजस्तो लाभ लिन भने अझैसम्म सकेका छैनाँै, केसीले भने ‘कतिपय स–साना कुराहरुको बारेमा समेत थाहा नहुँदा अहिले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा क्षति व्यहोर्नु परेको छ ।
यसैबीच तालिम प्राप्त बंगुरपालन व्यवसायी अनिता विकले कुनै पनि पशुपालनका लागि सर्वप्रथम आवास, पुँजीको व्यवस्थापन, रोग र खोपको बारेमा पूर्ण परामर्श लिनु अनिवार्य रहेको बताईन ।
उनले स्थानीयस्तरमा पालिने पशुपंक्षीलाई कसरी विभाजन गरी व्यवसायीक रुपमा पाल्न सकिन्छ ? भन्ने विषयमा पूर्ण जानकारी तथा परामर्श लिनु निकै महत्वपूर्ण रहेको बताईन् ।
यदि कुनै पनि पशुपंक्षी पालन गर्र्दै आएका किसानले पशुको उचित व्यवस्थापन सन्तुलित आहार, पशुको शारीरिक संरचना र कार्यहरु, पशुलाई लाग्न सक्ने रोगहरुको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्ने हो भने आयआर्जनका लागि कुनै समस्या नुहने उनको अनुभव छ ।
यस्तै पशुपंक्षीमा लाग्ने रोगहरुको प्रकार, रोगहरुबाट बच्ने तथा बचाउने सुरक्षा सावधानीका उपायहरु, कारण, चरणवद्ध उपचार शैली, रोगी तथा निरोगी पशुहरुको पहिचान तथा लक्षण,
खोपहरुको जानकारी, उन्नत जातका पशुपंक्षीहरुको छनोट, पहिचानलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर आफूहरु जस्तै पशुपालन व्यवसायकर्ताहरुलाई स्थानीय सरकारले विभिन्नखालका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने अनिवार्य रहेको उनीहरुको माग छ ।
समाजलाई समृद्ध बनाउनका लागि सर्वप्रथम कृषि पेशामा सबै अग्रसर बन्नुपर्ने भएकाले यसका लागि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले विशेषखालका कार्ययोजनाहरु ल्याउनुपर्ने उनीहरुको भनाई छ ।